Email ugu dir Acid: Imtixaanka Emailka, Dhibaataynta iyo Dhaqanka ugu Fiican | Martech Zone
Email ugu dir Acid: Imtixaanka Emailka, Dhibaataynta iyo Dhaqanka ugu Fiican
Arbacada, Maarso 23, 2016 Axad, Janaayo 15, 2017 Douglas Karr
Waxaa jira sabab shirkadaha badankood qorsheynayaan inay waqti iyo lacag badan ku bixiyaan suuqgeynta emaylka ee 2016: suuqgeynta emaylka wuxuu sii wadaa inuu hayo ROI-ga ugu sarreeya dhammaan kanaallada suuqgeynta dhijitaalka ah.
Suuqgele kasta wuxuu leeyahay adeeg bixiyaha emaylka uu doorbido iyo liiska hubinta horumarka iimaylka. Laakiin inta badan waxay iska indha tiraan waxa ugu muhiimsan ee ololaha: iyagoo ku tijaabinaya emaylkooda aalado badan iyo macaamiil ka hor inta aysan dejin ololaha la geeyo. In kasta oo ololeyaal badan oo tijaabo ah adoo emayl ugu diraya sanduuqooda iPhone ama Gmail, taasi kuma filna. Sababta Sababtoo ah iimayl kasta oo macmiil ah wuxuu si kale u siiyaa lambar.
Email ugu soo dir muuqaalka guud ee Acid
Iimayl ku qor Acid waxay bixisaa baaritaanka emaylka, cilad bixinta iyo horumarsan Analytics aalado ka caawiya shirkadaha fududeynta iyo hagaajinta dadaalkooda suuq geynta emaylka. Shirkaddu waxay tijaabisaa ololeyaal emayl ah oo ku saabsan 45 macaamiisha iimaylka iyo aaladaha kala duwan waxayna siisaa aalado lagu xalliyo arrimaha bixinta La aasaasay 2009, Email on Acid wuxuu ka caawiyay in ka badan 80,000 shirkado adduunka oo dhan inay tijaabiyaan emaylkooda.
Suuqleydu waxay u adeegsadaan Email-ka Acid si ay u fududeeyaan emaylka tijaabinta ee laga sameeyay xoqan iyo adeeg bixiye kasta oo emayl ah. Laakiin intaas maahan - Email-ka Acid wuxuu bixiyaa qalab kale oo kala duwan, oo ay ka mid yihiin:
Xiriirinta iyo ansaxinta sawirka
Falanqaynta lambarka iyo HTML optimizer
Aaladda wada shaqeynta
Falanqaynta bogga internetka ee macaamiisha websaydhka badan iyo aaladaha moobaylka
Marka lagu daro qaybta ugu muhiimsan ee qalabka, Email-ka Acid wuxuu bixiyaa ilo badan iyo taageero macaamiil oo aan lala tartamin. Kulan bulsho oo ka kooban suuqgeeyayaal emayl, koodhleeyeyaal iyo naqshadeeyayaal ayaa loo heli karaa cid kasta, oo lacag la’aan ah. Iyo Emailka Xarunta Kheyraadka Asiidhku wuxuu martigaliyaa maktabad jawaab-celin bilaash ah iyo tusaalooyin isku-dhafan oo dareere email ah, hagayaal ah, waraaqo-caddeyaal iyo waxyaabo kale oo badan.
Ahmiyada Imtixaanka Emailka
Macaamiisha emaylka iyo aaladaha mobilada waxay u muujiyaan HTML si kala duwan maxaa yeelay macmiil kastaa wuxuu u dhiibaa HTML qaabkiisa gaarka ah. Taasi waa sababta koodhkaaga looga tagi karaa inuu xaq ku yeesho Muuqaalka oo hadana u muuqdo inuu ku quruxsan yahay macmiilkaaga Gmail
Haddii aadan tijaabin inaad ogaatid arrimaha sirta iyo gudbinta kahor intaadan ololeynin ololahaaga, kaqeybgalka emaylkaaga (iyo sumadda iyo ROI) saameyn taban ayey ku yeelan karaan. Xaqiiqdii, boqolkiiba 70 shaqsiyaadka waxay yiraahdaan waan tirtiri doonaa emaylka isla markaaba haddii uusan sifiican ugu bixin sanduuqooda.
Horumarka ugu Wanaagsan ee Emailka
Haddii aad ku cusub tahay adduunka emaylka, waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadkan xoogaa xoogaa ah. Farsamooyinka casriga ah ee shabakadda wax lagu qoro wax yar kama taageerto macaamiisha iimaylka ah isla markaana dadku waxay kuu sheegaan inaad miisaska adeegsato. Waa tan shayga, miisaska ku jira koodhka e-maylku waa daruuri, markaa qorshee inaad khabiiro ku noqotid iyaga. Tilmaamo kale oo yar:
Naqshad sameynta hal keli ah nolosha ka dhigaysa mid fudud! Waxay ku filan tahay emayllada badankood (joornaalada ayaa ka reeban) waxayna sahlaysaa in lala qabsado aaladaha moobaylka.
U isticmaal 600px ballaca si fiican ugu habboon macaamiisha webka iyo desktop-ka badankood. Cabirka ayaa hoos loo dhigi karaa si uu ugu habboonado shaashadaha moobiilka iyadoo la adeegsanayo su'aalaha warbaahinta ama naqshadeynta isku dhafka dareeraha (ka sii akhri wax intaa ka badan).
Markaad shaki gasho, miiska. Ha iloobin faallooyinka iyo sabeynta. Miisaska ayaa ah habka ugu kalsoon ee lagu gaari karo jaangooyooyin isdaba joog ah. Farsamadan ayaa aasaas u ah naqshadeynta jawaabta iyo dheecaanka waxayna kuu oggolaaneysaa inaad ka faa'iideysato astaamaha isku xirnaanta qaabeynta qaabeyntaada.
Maskaxda ku hay dadka isticmaala mobilada. Qaar ka mid ah nashqadeeyayaasha ayaa xitaa u wareegay naqshadeynta "mobilada ugu horreeya". Habkani wuxuu si gaar ah ugu guuleystaa emayllada fudud sida dib-u-dejinta ereyada sirta ah, emayllada macaamilka, iyo cusbooneysiinta koontada.
Iyo Emailka Acid oo kaliya la sii daayay a tifaftire email oo bilaash ah, oo shabakad ku saleysan. Tifatirahaani wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay dhisaan, wax ka beddelaan, horay u eegaan oo ay ku hagaajiyaan emayllada hal codsi waqtiga-dhabta ah.
Tijaabo, Tijaabo, Tijaabo!
Koodhka emaylku wuxuu noqon karaa mid khiyaano badan. Sida kaliya ee lagu hubiyo in e-maylkaagu meel fiican ka arki doono meel walba waa tijaabinta. Emailka Acid ayaa kaa caawin kara taas adoo soo saara shaashadda shaashadda emaylkaaga dhammaan macaamiisha ugu caansan iyo aaladaha wax ka yar 30 sekan.
Adeegyada baaritaanka emaylka ka sokow, Email-ka loo yaqaan 'Acid' wuxuu ku siiyaa talooyin dhib iyo macluumaad ku saabsan wixii dhibaato ah ee aad la kulanto, baaritaanka spam-ka-hor-gelinta, iyo emaylka sare ee dirista ka dib. Analytics. Shirkaddu sidoo kale waxay qoraa baloog aad u fiican oo ka hadlaya mowduucyada sida Length Line Line Cilad-bixinta or Khiyaanooyinka Horumarinta Emailka ee ugu Fiican iyo Jabsiga.
Iyada oo tiro badan oo macaamiisha emaylka ah iyo aaladaha la heli karo, tijaabinta emaylka ayaan ahayn wax ku habboon; waa lama huraan. U qaad dadaalka emaylkaaga heerka xiga:
Saxiix Saxiix Bilaash Toddoba maalmood ah oo Tijaabo Email ah oo ku saabsan Acid!
Tags: emailemail dhisenaqshadeynta emaylkahorumarinta emailkatifaftiraha emailkaemayl ugu dir asiidhhaya'ad emailimtixaanka emaylkabalaca emaylkaemaylka gacantatifaftiraha iimaylka ee shabakadda
Waa maxay Teknolojiyadda ay Suuqleyda Heerka C-maal Gashanayaan?
ROBO: Sidee Dukaameystayaasha Maanta ay wax ugu baaraan internetka oo ay ku iibsadaan qadka
Apr 18, 2016 at 10: 19 AM
Tilmaamo fiican! Waxay u egtahay qalab weyn, in kasta oo aan haddaba isticmaalayo GetResponse. Aad ayey muhiim u tahay in la sameeyo imtixaannada A / B ee ololayaasha emaylka. Wax si fiican u muuqda waxaa laga yaabaa inaysan ku jirin fikradda dadka kale.